Ikati lasePheresiya: umhlahlandlela kulolu hlobo | Amakati kaNoti
El Ikati lasePheresiya yiNkosi yamakati. Inhle kakhulu, inhlonipho. Kuyisilwane esinomlando. Inomlingiswa okhetheke kakhulu nokubukeka osekukhohlisile izigidi zabantu emhlabeni jikelele; mhlawumbe izoncibilikisa inhliziyo yakho ngokushesha kunokuba ucabanga. Ngaphezu kwalokho, uyathandeka kakhulu, kepha uhlobo lokuzijabulisa olujwayelekile ngokohlanga lwakhe.
Njengoba sazi ukuthi uyayithanda, sikulethela okuthunyelwe okuhle kakhulu mayelana nekati lasePheresiya, lapho ungathola khona ngokuphelele konke okufanele ukwazi: imvelaphi yayo, umlingiswa wayo, impilo yayo, isimilo sayo, ... nokuningi kwayo, nokunye okuningi. Ungaphuthelwa.
1 Landa i-ebook yekati lasePheresiya MAHHALA
2 Umsuka wekati lasePheresiya
3.2 UGen I
3.2.2 Kufakwe umthunzi
3.3 UGen C
3.4 UGeneral A.
4.13 Ukuhlukaniswa kweCFA kwekati lasePheresiya
5 Ukuziphatha / uhlamvu
5.1 Ungayenza kanjani ikati lami lasePheresiya lizwane nelinye ikati
5.1.1 Isigaba sokuqala
5.1.2 Isigaba sesibili
5.1.3 Isigaba sesithathu
6 Inhlanzeko nokunakekelwa
6.1.4 Ungakwazi ukugeza?
6.1.4.1 Ujwayela kanjani indlu yangasese
6.1.5 Umgeza kanjani
6.2.1.1 Ngicabanga ukuthi yomile
6.2.1.2 Ngicabanga ukuthi kumanzi
6.2.1.3 Ukudla kwemvelo
6.2.3 Ikati lasePheresiya likhipha izikelemu
6.3 Okunye ukunakekelwa
7 Izifo nezinkinga zempilo
7.1 Izinkinga ngenxa yesimo sobuso bakho
7.2 I-hypertrophic cardiomyopathy
7.3 I-seborrhea enamafutha
7.4 I-oculocutaneous albinism
7.5 Umsele wezinyembezi uyachichima
7.6 I-hookworm yokuzalwa
7.7 Amatshe e-Urinary
7.8 I-hip dysplasia
7.9 Isifo sezinso sePolycystic
7.10 Patella okunethezeka
7.11 Isikhumba sigoqa i-dermatitis (ebusweni)
7.12 Izinwele amabhola
8 Izintshisekelo zekati lasePheresiya
8.1 Isikhathi esidlule sobukhosi
8.2 Mayelana noboya
8.3 Isikhathi sokuphila
8.4 Kungaphakathi noma ngaphandle?
8.5 Impango ... ikati lasePheresiya
8.6 Ikati elidumile
8.7 Bathi bayazithanda izincomo
8.8 Qaphela ukweqisa
8.9 Ikati lasePheresiya »peke-face»
8.10 Ama-litter amancane kakhulu
9 Intengo / Intengo yekati lasePheresiya
9.1 Ukuthenga kuphi
9.1.1.1 Uyaluqonda yini ulimi?
9.1.1.2 A kitten purebred akakaze mahhala
9.1.1.3 Imininingwane yokuxhumana
9.1.1.4 Izithombe, kulapho okuhlangana khona
9.1.1.5 Ingabe ujahe ngokweqile?
9.1.2 Izitolo zezilwane ezifuywayo
9.2 Isimo sempilo yenzalo
9.3 Izintengo zamakati wasePheresiya
10 Hlakulela ikati lasePheresiya
Landa i-ebook yekati lasePheresiya MAHHALA
Lo mbhalo ubanzi kakhulu, siwudalile ukuze sibe nawo umhlahlandlela ophelele kwikati lasePheresiya. Ukuze kwenziwe kube lula ukufunda nokuthi ukwazi ukukufaka kungobo yomlando kulabhulali yakho, sihlanganise i-ebook ngefomethi ye-pdf. Yilande mahhala ngokuchofoza kusixhumanisi esilandelayo:
Landa i-Persian Cat eBook
Umsuka wekati lasePheresiya
Akwaziwa kahle ukuthi avele nini amakati anezinwele ezinde. Futhi ukuthi ukuphela kwezinambuzane ezazinegciwane eliqinisekisa ukuthi uboya bude yi-lynx nengwe yeqhwa, futhi ngokwazi, UFelis catus akakaze awele izindlela ngazo zombili. Okungashiwo ngokuqinisekile yilokho yavela okokuqala kulokho namuhla okuyi-Iran (Ngaphambili lalibizwa ngokuthi yiPheresiya). Ukusuka lapho uPietro Della Valle wase-Italy (1586-1652) wathatha amakati amaningana ayenezinwele ezinde wawaletha e-Italy ngonyaka ka-1620. Eminyakeni ethile kamuva, uNicolas-Claude Fabri de Peiresc, isazi semvelo nesazi, waletha amakati ezinwele ezinde ezivela i-Ankara yanamuhla (i-Angora yasendulo) eTurkey, iya eFrance. Kuze kube manje, akukwazanga ukuthola ukuthi ngabe wonke la makati ayeluhlobo olufanayo.
Kungani ikati linezinwele ezinde esimweni sezulu esishisayo njengamanye amazwe afana ne-Iran? Ngokuqinisekile wake wazibuza, kusukela imvelo inika izilwane ezihlala ezindaweni ezibandayo ezinezinwele ezinde, ngamakhaza kakhulu. Yebo, kunemibono eminingi:
Omunye uthi abanye okhokho bekati lasePheresiya babenezinwele ezinde ngoba bakholelwa ukuthi badabuka eSiberia. Kamuva bethulwa e-Asia, futhi kamuva eNtshonalanga Yurophu.
Umbono wesibili uthi izinwele ezinde zazingelutho ngaphandle kuka ukuguquka kwesimo lokho kwenzeka ekatini elifushane elalihlala eMpumalanga. Lesi sakhi besingagcinwa sibonga ukufuywa kanye nokukhethwa kwamakati ukufuya.
Futhi owesithathu uyakukholwa lokho umehluko we-phenotypic wamaPheresiya nabendluokusho ubuso obuyindilinga, izindlebe ezibanzi, umzimba oqinile, zihlobene nekati likaPallas. Leli yikati lasendle elihlala e-Asia Ephakathi, linezinwele ezinde ngokuqhathaniswa, ubuso obuyisicaba, amehlo ayindilinga nezindlebe ezehlisiwe.
Ngenkathi kuyimibono ehluke kakhulu, zonke zikhomba ezindaweni ezise-Asia. Kepha bekungekho lapho inqubo yokukhetha nokuzalisa iqala khona, kepha eNgilandi. Eqinisweni, 'kuyikhaya lesibili' lekati lasePheresiya, ngoba vele ngekhulu le-XNUMX la makati ayenabalandeli abaningi. Emuva lapho izici zekati le-longhair lase-Asia laqala ukwehluka kulelo lekati lasePheresiya. Kodwa inelukuluku lokwazi ngoba kuphela amakati aluhlaza okwesibhakabhaka abizwa ngokuthi 'amaPheresiya'; nanamuhla lokho esikubiza ngokuthi yiPheresiya, kubo ikati 'elinezinwele ezinde'. Ukuhluka kombala ngamunye kufana nohlobo oluhlukile.
Kusukela ukuzalanisa kwaqala kuze kube manje, ziye zabonakala Ukwehluka okungu-150. Abafuyi abaningi, ikakhulukazi abavela e-United States of America, bachitha isikhathi bekhiqiza amazinyane anekhanda eliyindilinga ngokwengeziwe, umzimba obanzi futhi oqinile, nesifutho esithambile. Kusukela ngo-1920 kuze kube manje bayaqhubeka nokuzalanisa, noma kunjalo kukhona odokotela bezilwane abacabanga ukuthi ikati elinezici lezi lingaba nezinkinga eziningi zokuphefumula. Naphezu kwakho konke, e-USA kanye nasemazweni amaningi ase-Europe, 'amakati adlulele asePheresiya', njengoba abizwa kanjalo, athandwa kakhulu.
Ikati lesimanje lasePheresiya belilokhu exotic ikati umzali. Uhlobo olunezinwele ezimfushane olunazo zonke izici zasePheresiya ngaphandle kobude bezinwele zalo. Lolu hlobo olusha lwadalwa e-United States ngeminyaka yama-60s, futhi lwabonwa ngonyaka we-1984. Ngejazi elilinganayo, licwebezela kakhulu, kufana nePheresiya, ikati elikhetheke kakhulu.
Kepha masingaphambuki 🙂. Manje ake sibone ukuhlukaniswa kwekati lasePheresiya.
Kukhona izinhlobo ezingaphezu kuka-100 wamakati wasePheresiya, ngakho-ke akungabazeki ukuthi uhlobo oluveza imibala ehlukahlukene kakhulu (emhlophe, emnyama, bicolor ...). Njengoba maningi kangaka, sekwenziwe amaqembu amane, ngakho-ke kulula kakhulu ukuwahlukanisa. Ngamunye wabo wehlukile kwabanye, kepha konke kunqunywa ngokwendlela le mibala esatshalaliswa ngayo kanye nezakhi zofuzo ezithintekayo.
Lapha kuzongena wonke amakati asePheresiya lawo zinombala owodwa kuphela, okuqinile noma okuxutshiwe: okumnyama, okuluhlaza okwesibhakabhaka, i-lilac, okubomvu, ukhilimu, ushokoledi, okumhlophe, i-bicolor, i-tricolor.
Uma ikati lakho lasePheresiya linengxenye yezinwele zalo elonakele, kungenxa yokuthi linezakhi zofuzo ze-Inhibitor (ufuzo I). Ngokwesilinganiso sombala, amakati asePheresiya chinchillas ahlukile (igobolondo), kufakiwekufakwe umthunzi) noma ukubhema (ubhema). Ngakho-ke sine:
i-cameo: zimhlophe ngokukhishwa okubomvu
ukhilimu: abane-depigmentation enombala kakhilimu
ukhilimu oluhlaza okwesibhakabhaka: ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka elinemibala ekhilimu
igolide: ezingagolide ezinesizinda esibomvu
isiliva: ezimhlophe, nokukhishwa kwesiliva
i-tricolor: AmaPheresiya anesizinda sombala oqinile, kepha imibala emithathu ehlukene ihlukaniswe ngokucacile ngemuva nasekhanda.
intuthu emnyama: la maPheresiya anengubo yemibala ehlukene yegrey nomnyama. Izintamo zabo zingaba mhlophe.
Uhlobo lwe-C luvela emakati e-Siamese, nawo ahlinzeka ngama-protagonists ethu ngobuningi bombala oqinile kuwo i-cola, izindlebe, ikhala nase- imilenze.
Uhlobo lwe-Agouti (uhlobo A) kwenza amamaki asendle abonakale lekati. Ingahlanganiswa nezakhi zofuzo ezedlule. Ngokusho kombala, kwehlukaniswa izigaba eziyisikhombisa:
Faka amachashazi ombala noma umbala webala
Imibala eqinile noma ukwahlukana okuqinile
Tabby noma tabby
Bicolor noma i-bicolor
Izithunzi nentuthu, noma shaded / intuthu
Isiliva negolide, noma isiliva / igolide
Ngokusho kweCFA (Cat Fanciers 'Association) sizokwazi ukuthi sibhekene nekati lasePersia uma likhombisa lezi zici:
Inhloko, njengoba sishilo, kufanele ibe yindilinga, ne ugebhezi olubanzi. Isakhiwo saso kufanele sibe bushelelezi futhi sithambe, singabi nehaba ngokweqile. Ubuso kufanele futhi bube yindilinga, bubekwe entanyeni okufanele ibe mfushane futhi ibanzi. Uma ibukwa kuphrofayili, isilevu, ikhala, nebunzi kubonakala njengokuhleleka mpo.
Kufanele kube njalo ithuthukiswe kahle, oyindilinga y igcwele.
Kufanele zigcwale, nge impumulo ifakwe kahle phakathi kwabo.
Amehlo kufanele Grandes, umbala elikhanyayo, isiyingi. Bazohlukaniswa kude, kodwa babe sezingeni.
Kufanele babe njalo omncane, ne ithiphu oyindilinga futhi i base hhayi ububanzi kakhulu. Kumele bancike phambili, babekwe kude kakhulu futhi basesikhundleni esiphansi.
Kumele ibe nemilenze ephansi, isifuba esibanzi futhi esijulile. Ukuqina, enethoni enhle yemisipha.
Kufanele babe njalo enamandla nobubanzi.
Imilenze yangaphambili idinga ukuthi iqonde, kuyilapho imilenze yangemuva izolunga kuphela uma ibukwa ngemuva. Nabo kufanele babe njalo ububanzi nobufushane.
Uma sikhuluma ngomsila, lokhu kuzoba mfushane, kodwa ilinganiswe kahle.
Izinzwani zakhe (ezinhlanu emilenzeni yangaphambili kuthi ezine ngemuva) sizoba ndawonye. Uzipho luyoba lukhulu, luqine futhi luyindilinga.
Lesi silwane esigxishiwe kufanele sibe ne- izinwele ezinde ezijiyile ehlanganisa umzimba wonke, ngisho nomsila. Ukuthungwa kwayo okuhle futhi okucwebezelayo kuzokwenza ungafuni ukuyeka ukuyiphulula.
Ukugwema ukudideka, iCFA ibheka ukuthi ngeke kube yikati lasePheresiya uma ikhombisa:
ama-moles noma amabala amancane
iminwe eminingi noma embalwa kunaleyo obekufanele ube nayo
Ukuhlukaniswa kweCFA kwekati lasePheresiya
Inhloko - amaphuzu angu-30
Umzimba - amaphuzu angu-20
IMantle - amaphuzu ayi-10
Ukulinganisela - amaphuzu angu-5
Ukucwengwa - amaphuzu amahlanu
Umbala wejazi - amaphuzu angu-20
Umbala wamehlo - amaphuzu ayi-10
Ukuziphatha / uhlamvu
Ubuntu noma kunalokho, ubuhlobo bwekati lasePheresiya buhlanganiswe ngokuphelele nalabo balabo bantu abazolile. Eqinisweni, amaPheresiya angamakati kubo bayathanda ukuchitha amahora namahora belele kusofaKangangokuthi zivame ukwaziwa ngamagama anelukuluku anjengokuthi "ifenisha yesikhumba" noma "amahlosi osofa." Ngeshwa, uma ufuna i-feline esebenzayo, amaPheresiya ngeke abe yisinqumo esihle kakhulu, yize-ke futhi izobe inezikhathi lapho izofuna ukudlala igijime, kepha hhayi njengoba izovama njalo kunjalo, ngokwesibonelo, nge-flare.k noma ikati elivamile laseYurophu.
AmaPheresiya ahlakaniphe kakhulu, futhi azi kahle ukuthi ngubani obanakekelayo. Bangamthanda kakhulu lo muntu, ongeke angabaze ukucela ukutotosa nokuthambisa ... kepha ngaphandle kokudlula ngokweqile. Uma beqala ukungazizwa kahle, bazokwazisa. Kanjani? Kulula kakhulu: isikhathi esiningi bazovele bahambe, kepha uma bezwa ukuthi bayahlukunyezwa bangakwazi ukuhogela, baphonse izindlebe emuva futhi, uma ukuhlukunyezwa kuqhubeka, bangaklwebha futhi / noma balume. Ngakho-ke, Kubaluleke kakhulu ukuthi sibashiye bodwa, sibayeke beze kithi hhayi ngenye indlela..
Ngaphandle kwalokho, iyikati elilungele abantu abahlala bodwa, nakulabo asebekhulile, ngoba yize bedinga ukunakekelwa okuthile esizokubona ngezansi, yilowo mthwalo wemfanelo ozobenza bazizwe belusizo, ukuthi bazizwe bephila ngempela futhi bethandwa. Okuthile, phela, sonke esikudingayo, ikakhulukazi ngemuva kweminyaka ethile. Yize ikati lasePheresiya lingenza ikati elifanele lemindeni noma imibhangqwana emisha, inqobo nje uma lifuna umngane onoboya ozolile ngokwemvelo.
Ikati lasePheresiya lifana nesilwane esigxishiwe esithanda ukulawula usuku lwaso usuku nosuku, futhi esinye sezimbalwa lokho izovumelana kalula nokuhlala endlini, kungaba eflethini, efulethini noma endlini. Futhi lokho kungenxa yesimo sabo sokuthobeka, babhekwa njengamakati asendlini kuphela, ngakho-ke ngeke kudingeke ukhathazeke nganoma yini. Noma, yebo, lokho akusho ukuthi akudingeki ukuthi sikushiye ekhaya, kuphela ngokudla, amanzi nombhede. Kuyikati, isidalwa esiphilayo, esizodinga ezinye izinhlobo zokunakwa, ngaphandle kwalokho lizobhoreka futhi lingadala umonakalo njenganoma yiliphi elinye ikati.
Kepha uma inakekelwa kahle, kuzoba nzima kuwe ukumuzwa meow. Amaningi awawenzi ngisho umsindo, ngaphandle kwalapho esaba noma lapho ezizwa engaphilile. Ngaphezu kwalokho, bahlakaniphe kakhulu, kangangoba bazofunda ngokushesha okukhulu lapho kufanele baye khona ukuzikhulula, futhi iyiphi indawo engcono yokuthatha isihlwathi (imvamisa, kuzoba seduze komuntu abamethemba kakhulu) . Futhi, njengokungathi lokho bekunganele, uma kusasa uzokwandisa umndeni wakho wekati, imvamisa bamukela umlingani wabo omusha ngaphandle kwezinkinga, kodwa noma kunjalo kubalulekile ukuthi uhambe kancane kancane ukugwema ukuphoxeka. Ukuze ubenze babe ngabangane, kufanele ulandele ezinye izindlela zokuzijabulisa ezizobenza babe nobudlelwano obuqinile nobungapheli, yibo abalandelayo:
Ungayenza kanjani ikati lami lasePheresiya lizwane nelinye ikati
Leli kati eliyigugu lasePheresiya labanjwa ngenkathi lizamula
Into yokuqala okufanele siyenze, okokuqala, ukwethula ikati elisha esiphathweni bese silibhekisa ekhaya, lapho isiPheresiya sethu nakanjani sizobe sisilindele khona. Lapho nje sivula umnyango, kunconywa kakhulu ukuthi sibheke ukuthi zombili lezi zilwane zenza kanjani: uma esinye sazo sihayiza kanye / noma sibhonga, sizothatha ngokushesha 'esisha' siye egumbini esizobe simlungiselele ngalo ukudla, amanzi, umbhede nethileyi lakhe lesihlabathi; ngaphandle kwalokho, okungukuthi, uma befuna ukwazi ngomunye nomunye, lapho-ke sizoshiya ikati elisha lisengaphakathi kwesithwali phansi ukuze bezwe iphunga. Sizoyishiya imizuzu engu-5-10 (asikho isidingo sokuthi siphoqe isimo) futhi sizothatha ikati elisha siye nalo ekamelweni. Ngosuku olulandelayo, nangesonto, sizophinda lesi senzo esifanayo nsuku zonke, izikhathi ezimbalwa kuze kube yilapho ikati elisha liqala ukukhombisa isifiso sokuphuma lihlale nekati lasePheresiya, futhi aze akhululeke kakhudlwana ngokuba khona kwakho.
Ngalesi sigaba sokuqala kujwayelekile ukuthi, yize kubonakala sengathi konke kuhamba kahle, kukhona okunye ukuhogela. Kepha uma amakati engakhiphi ozipho lwawo ngaphandle, futhi asondelane ngokufuna ukwazi, akunankinga.
Lapho nje lezi zilwane ezimbili sezizwa kahle ngomunye nomunye, singazikhuthaza (thina, yebo 🙂) ukuzihlanganisa, ngaphandle kwezithwali phakathi. Vele, ngincoma ukuthi okungenani izinsuku ezingama-2-3 zibeke ezinhlangothini zombili zesithiyo senganeNgale ndlela, laba bobabili bazoba nenkululeko efanayo yokuhamba futhi bazokwazi ukwenza okuthile okungenzeka ukuthi bazokwenza okuningi kusukela manje kuqhubeke: ukuthintana ngemilenze yabo. Futhi, ngokufanayo, uma kungekho ukuthimula noma isimilo 'esinolaka', kusukela ngosuku lwesine, manje, susa isithiyo bese ulinda ukubona ukuthi baziphatha kanjani.
Kulesi sigaba kubaluleke kakhulu ukuthi asizoleNgaphandle kwalokho izilwane zizoqaphela futhi zizizwe zikhululekile. Uma uzizwa uzizwa unovalo kakhulu, yiba nomcako noma usebenzise imizuzu eyishumi eyedlule wenza izivivinyo zokuphefumula noma zokuphumula, noma wenze okuthile okukudambisayo. Kungazwakala kungenangqondo, imininingwane emincane, kepha ngethembe, kuyasebenza.
Kulesi sigaba sesithathu nesokugcina, amakati akho amabili okungenani azobekezelelana. Sekuyisikhathi sokuqala ukuphila impilo ejwayelekile, nabangane ababili abanoboya obuhle. Vele, ngezikhathi ezithile uzobona ukuthi bayathimula, noma baze bazibeke phezu kwabanye sengathi bayalwa, kepha lokhu kuziphatha kujwayelekile. Yini enye, Uzokwazi ukuthi bangene enkingeni uma:
Roll izindlebe zakho emuva, noma phambili
Khombisa amazinyo akho
Gcina ukubuka kwakho kugxile 'kumphikisi' wakho
Bayathukuthela futhi / noma bavungama
Gcina umsila uphansi, uhambisa ithiphu kuphela, noma uma unayo phakathi kwemilenze
Ukube bekunjalo ukuthi bobabili laba baboniswe kanjena, kungadingeka ukuyithatha uyihambise kwenye ikati, ngemuva kwalokho ngizokweluleka ukuthi uthenge i-Feliway brand diffuser. Lo mkhiqizo ulingisa ama-pheromones angama-feline, abenze bazizwe bezolile futhi, ngakho-ke, bathule lapho benomngane wabo onoboya.
Isisabalalisi sizovuleka igumbi lapho umndeni wenza impilo eningi, kepha akulimazi ukuthenga okunye ukuwafaka lapho amakati echitha isikhathi esiningi ephumule khona. Ngale ndlela nakanjani sizobamukela.
Kumele ube nayo ukubekezela okukhulu lapho ufuna ikati ukuzwana nelinye elinoboya. Kuyizilwane ezihlala ezindaweni ezingavamisile ukuthanda kakhulu ukuthi zabelane 'ngezizinda' zazo nabanye. Kuzoncika ekuhlalisaneni kwekati ngalinye okuthatha isikhathi esincane noma esincane ukwamukela 'okusha'. Ngokwami ​​ukubona ngingakutshela ukuthi ukushesha akukuhle, futhi futhi akuphoqi isimo. Uma kwenzeka sekwenziwe, okuwukuphela kwento esizoyizuza ukuthi amakati awagcini nje ngokuzwana, kodwa futhi alwa nakho konke okubandakanya (imvelo eshubile yomndeni, ukulimala, ukuwaqapha njalo).
Njengoba ngishilo, kule nqubo kubalulekile ukuhlala uzolile. Ngakho-ke, kuzodingeka ukuthi, ngaphambi kokuzihlanganisa, noma ngabe sisesigabeni sokuqala, siphefumula, sibale kuze kufike ku-10, futhi siwudedele kancane kancane umoya. Uma kungekho mphumela, siyaphinda. Ubungani besikhathi esizayo bamakati ethu amabili buxhomeke, ngaphezu kwakho konke, ukuthi sinjani isimo sengqondo lapho sinabo.
Ikati lasePheresiya lidinga ukunakekelwa nokunakekelwa okuningana ukuze lihole impilo ephelele, ejabulisayo.
Njengoba enezinwele ezinde, kuzodingeka ukuthi ibhulashi okungenani kanye ngosuku nohlobo lwekamu olwaziwa njengekhadi noma, okungcono nakakhulu, nge-FURminator, ekhetheke kakhulu ekususeni izinwele ezifile, kakhulu, iyasebenza kakhulu. Phakathi nezinyanga ezifudumele, noma kunjalo, kuzodingeka ukuthi ibhulashiwe phakathi kwama-2 no-4 amahlandla ngosuku, ngakho-ke ngeke ihlale ipholile nje kuphela, kepha futhi sizovimbela nendlu ukuthi ingabi nezinwele kakhulu 🙂.
Kufanele hlanza amehlo akhe nsuku zonke, ngoba bavame ukwethula ama-lagañas nokukhuzwa. Ukwenza lokhu, sizosebenzisa ukotini wokususa ukwakheka kwabesifazane esizowuthambisa emanzini afudumele. Ngemuva kwalokho, sizohlanza amehlo ngokucophelela, futhi sizomisa ngenye-ukotini owomile.
Sizozihlanza kanye ngosuku ngama-wipe akhethekile ozowathola emitholampilo yezilwane noma ezitolo zezilwane. Kuzodingeka ukuthi zidluliswe kuphela etendeni lokuzwa, okungukuthi, engxenyeni engaphandle yendlebe; ungangeni ngaphakathi.
Kunjalo. Umqondo uwukuthi ukujwayele kusukela ebuntwaneni, njengoba kuzothatha isikhathi esincane ukujwayela, njengalesi silwane esigxishiwe:
Ujwayela kanjani indlu yangasese
Ukwenza ukugeza kube yisikhathi esimnandi kuye, sizobeka ithileyi eliphansi elinamanzi afudumele (kungabandi kakhulu futhi kungashisi kakhulu) ngaphakathi endlini yokugezela, futhi sizomkhuthaza ukuba eze nocezu lokudla aluthandayo. Impela izokusondela ngokushesha, ngakho-ke uma ifika, mnike ukutotosa okuningi nokudla kwakhe ngokushesha nje lapho esondela etreyini. Okwamanje, ngeke simgeze, sifuna nje ukuthi ahlanganise ithileyi lamanzi nokuthile okuhle.
Cishe izinsuku ezingama-5-7, sizoqhubeka nokwenza okufanayo, futhi kusukela ngosuku lwesishiyagalombili sizokwazi ukuthatha amanzi amancane kuthileyi bese siwathela ngokucophelela phezu kwawo, njengo "lowo ongayifuni leyo nto". Kungenzeka ukuthi uzomangala, noma esabe, kepha uma ehlala endaweni efanayo, makazenzele ukwesaba futhi, lapho esekutholile, mnike umklomelo (ukuphatha ikati, ukuphulula).
Ngosuku olulandelayo singaqala ukufaka ikati kubhavu, inqobo nje uma sizizwa sizolile futhi sibona ukuthi uboya abukuthandi ukuba endlini yokugezela.
Ngaphambi kokuyifaka kubhavu wokugeza, kufanele silungiselele konke esizokudinga: imoto futhi conditioner for amakati, toalla, ukomisa bese gcwalisa ubhavu ngamanzi afudumele (cishe ngo-2-4cm). Unayo? Ngemuva kwalokho qala ukusebenza:
Sizohamba kahle ikati, ngaphandle kobuso, bayibambe ngemuva (iqinile, kepha ithambile, ngaphandle kokuyilimaza)
Sizofaka insipho emzimbeni wonke, ukwenza i- ukubhucungwa okuncane kuze kudale igwebu.
Sizocacisa, kususwe zonke izinsalela.
Sizosebenzisa i-conditioner, njengoba senza nge-shampoo, futhi sizoyivumela ukuthi isebenze okungenani imizuzu engu-2.
Sizocacisa okokugcina, futhi sibeka ithawula.
Le siyoma kahle izinwele nge-dryer. Ngendlela, kunconywa kakhulu ukusebenzisa ubuchwepheshe, ngoba kusivumela ukuphatha ikati kangcono. Okunye ongakwenza ukuthi umuntu oyedwa abambe ikati, kanti omunye uphethe ukomisa izinwele zalo. Qaphela kakhulu ukushisa komoya kokomisa: uma kushisa kakhulu, singalimaza ikati.
Uma somile, sizokama, kuqala ngendawo yentamo, kudlule entanyeni nasemzimbeni, kuze kufike emuva.
Njenganoma iliphi elinye ikati, kufanele silinakekele. Lokhu kusho ukuthi kufanele sikunikeze konke okudingayo ukuze wenze impilo yakho nathi ibe yinhle ngangokunokwenzeka.
Sizoqala ngezisekelo: ukudla. Unganikeza ikati lakho izinhlobo ezintathu zokudla: ukudla okomile, ukudla okumanzi (amathini), noma ukudla kwemvelo. Ake sibone ubuhle nobubi babo ngamunye wabo:
Ngicabanga ukuthi yomile
Luhlobo lokudla oluthengiswa kakhulu, ngoba likhululekile kithina. Kodwa-ke, kunemikhiqizo eminingi futhi emisha ivela ngezikhathi ezithile, ngakho-ke kuzoncika emalini esiyifunayo / engayisebenzisa ukukhetha eyodwa noma enye. Engikwelulekayo ukuthi uyinikeze ukudla okusezingeni elifanele, ngoba impilo yamanje neyesikhathi esizayo izoncika kakhulu kuyo. Ngakho-ke, izifunzo ezine- 70% wenyama encane kanti imifino esele yiyona efaneleke kakhulu. Lokhu kuzogcina ijazi lithambile futhi licwebezela, amazinyo aphilile futhi aqinile, ngamafuphi, uzoba nekati eliphilile.
Okuwukuphela kwento embi ukuthi banomswakama omncane kakhulu (ngaphansi kuka-20%), futhi njengoba amakati engaphuzi amanzi amaningi, kufanelekile ukuwanikeza ikani ngezikhathi ezithile, ikakhulukazi ehlobo lapho bephuza okuncane kakhulu.
Ngicabanga ukuthi kumanzi
Okuphakelayo okumanzi kungenye enomswakama okungenani ongu-80%. Kubuye kube ntofontofo, njengoba kufanele uvule kuphela bese ukhonza. Kepha banenkinga ebaluleke kakhulu futhi yilokho asikwazi ukushiya umkhombe ugcwele usuku lonke ibizodonsa izimpukane, izintuthwane nanoma yiziphi izinambuzane ezingaba seduze kwendlu. Ngaphezu kwalokho, inani liphakeme ngandlela thile, ngakho-ke okuningi kuvame ukunikezwa njengomvuzo.
Ngincoma nokuthi ngifune eyodwa ikhwalithi, enephesenti ephezulu yenyama, ukuze umzimba wekati uhlale uphilile kukho konke ukuphila kwalo.
Lolu hlobo lokudla yilona olufanele kunazo zonke izilwane, kufaka phakathi amakati asePheresiya. Banganikezwa inyama yamathanga enkukhu nezinye inyama (zihlala zingenamathambo), isibindi, inhliziyo, inhlanzi (ngaphandle kwamathambo), nemifino efana neparsley noma i-thyme. Ngaphambi kokukunika, kufake ebhodweni aze aqale ukubila amanzi ukuze ihlanzwe kahle.
Ukubanika ukudla kwemvelo kuyabiza kakhulu kunokubondla futhi kudinga isikhathi esithe xaxa sokuzilungiselela, kepha lokho okuchitha ekudleni ... uyonga ezindlekweni zezilwane, ngakho-ke ekugcineni kuyakhokha.
Kuphoqelekile ukuthi umnikeze le mithi yokugoma elandelayo ukuze amasosha akhe omzimba ahlale enamandla ukuze akwazi ukubhekana nokutheleleka okungenzeka:
Ezinyangeni ezi-3: i-feline trivalent, evikela i-rhinotrachetitis yegciwane, i-panleukopenia ne-calcivirus.
Ezinyangeni ezi-4: ngokumelene ne-leukemia ye-feline, kanye nomthamo wesibili we-trivalent.
Ezinyangeni ezi-5: isilinganiso sesithathu nesokugcina esilinganayo.
Ezinyangeni ezi-6: ngokumelene namarabi.
Kanye ngonyaka kuzodingeka ukuthi uphinde ugonyelwe amarabi.
Khumbula ukuthi ngaphambi kokugoma, kufanele ube izikelemu.
Ikati lasePheresiya likhipha izikelemu
Kunezindlela eziningi zokususa ikati ezinsikeni: ngamaphilisi, ngamapayipi, ngezifutho noma ngamakhambi emvelo.
Amathebulethi: Zisebenza ukuqeda izimuncagazi emathunjini noma zangaphandle. Endabeni yokuthi bazoqeda noma balwe nezibungu, kuyadingeka ukuthi banikeze eyodwa njalo ezinyangeni ezintathu; futhi uma kungezamazeze kanye / noma imikhaza, kuzoba okukodwa ngenyanga.
Amapayipi: ziyasebenza kakhulu. Zifakwa ngemuva kwentamo, maphakathi nendawo, futhi ivikela izinambuzane inyanga yonke.
Fafaza: ikati lifafazwa nazo, kaningi ngenyanga njengoba uthanda, unakekele ukuthi lingafinyeleli emehlweni, ezindlebeni noma emlonyeni.
Umuthi wemvelo: njengokumgeza ngamanzi nolamula, noma ukufaka isipuni esincane semvubelo kabhiya ekudleni kwakhe, kuzogcina izimuncagazi kude nenja yakho enoboya. Vuliwe Lesi sihloko unamakhambi amaningi emvelo okuqeda amakhaza emakati.
Ikati lasePheresiya liyikati elinoboya elithanda inkampani. Uzokujabulela ukuba eceleni kwakho, kungaba ukubukela ithelevishini noma ukulinde ukuthi uqedele imisebenzi yakho. Ngaphezu kwalokho, uzwana kakhulu nezingane, ikakhulukazi uma benomuntu ozolile. Futhi, njenganoma yiliphi ikati, ayikho into ayithandayo njengokuthi bamnake futhi bamnakekele njengoba kufanele. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi:
Masimbekele ibhokisi lodoti egumbini lapho angenakuphazanyiswa khona, nesihlabathi esiqobayo esingangcolisi izinyawo zabo. Ngincoma leyo eyisihlabathi (uhlobo lwamagravel) exutshwe ne-betonite, noma leyo ye-silica. Intengo yayo iphakeme kancane kunaleyo yezinye izinkundla, kepha ukuba nekati elilodwa kungakunika izinyanga ezingama-2-3, uma kungenjalo.
Ukuba nobuso obuyisicaba, kubaluleke kakhulu ukuthi sikunikeze ophuza ibhola (konogwaja). Ekuqaleni kujwayelekile ukuthi ungazi ukuthi kusebenza kanjani, ngakho-ke kuzoba kithi ukukufundisa. Ungamdlulisela ucezu lweYork ham ngokwesibonelo ukuze abone iphunga futhi afune ukulinambitha.
Sizokuthengela imibhede eminingana ngoba kungenzeka ukuthi awufuni ukulala eyodwa kuphela. Ngakho-ke, ungafaka eyodwa ekamelweni lokulala, iscraper esinombhede egumbini lokuphumula, nesinye egumbini lokuphumula. Futhi ungakhohlwa izingubo zokulala ukumboza usofa noma izihlalo zezingalo.
Masichithe isikhathi esithile usuku ngalunye (imizuzu eyishumi cishe kathathu / ngosuku) ukudlala naye, ngoba yize kuyiqiniso ukuthi iyikati elihlala phansi, idinga ukuzizwa iyingxenye yomndeni, idinga ukuzijabulisa nathi. Emakethe uzothola amathoyizi amaningi amakati (amabhola, amagundane, izilwane ezigxotshiwe ...), kodwa shaya izimbobo ebhokisini lamakhadibhodi uzobona ukuthi kumnandi kangakanani, noma ukukhuthaze ukuthi uzame ukuthola intambo.
Noma nini lapho sibona ukuthi akazizwa kahle kakhulu, kufanele simyise ngokushesha kudokotela wezilwane.
Izifo nezinkinga zempilo
Ikati lasePheresiya yisilwane esigxishiwe ngeshwa sinezifo esingahle sizibeke njengezingezohlobo. Ukukhethwa nokuzalaniswa kwalezi zinsikazi kuchaze ukuthi njengamanje kufanele sibhekane nezinkinga eziningi ezingabalimaza. Masazi ukuthi yini okufanele siyilandele:
Izinkinga ngenxa yesimo sobuso bakho
Ngokuba nobuso obuyisicaba, nekhala elicindezelwe, imisele yakho yezinyembezi iyaqhubeka ikhiphe futhi ingcolise isikhumba ngaphansi kwamehlo akho, esingadala izilonda zesikhumba. Ngaphezu kwalokho, izinkophe nezinwele emakhaleni zingathinta amehlo, futhi ikhala labo elincane lingazibangela izinkinga zokuphefumula.
Ukulunywa kabi, noma malocclusion, kuvame kakhulu kula makati. Ukungasho lokho, ngenxa yokushintshwa kwekhanda labo, abesifazane banenkinga yokubeletha.
Lesi sifo sibangela i- ukukhuliswa kohlangothi lwesobunxele lwenhliziyo, futhi kungaholela ekufeni okungalindelekile kwesilwane. Kubekezelele phakathi kwe- 9 no-10% wamakati wasePheresiya.
Kuqukethe ukuba ne- isikhumba esinamafutha futhi esintekenteke.
Ebizwa nangokuthi i-Chediak-Higashi syndrome, ibangelwa yisakhi sofuzo esibangela lokho izinwele zilula kunokujwayelekile. Kubangela ukuthwebula izithombe nokuthambekela kokopha.
Umsele wezinyembezi uyachichima
Uma ikati lakho lingayeki ukukhala, mhlawumbe unepayipi lezinyembezi elichichimayo.
Kwenzeka emakati amnyama asePheresiya. Iqukethe i- ukuhlangana kwamajwabu amehlo amabili (ngezansi nangaphezulu) nge-membrane.
Esikwaziyo njengamatshe kuvame kakhulu emakati asePheresiya, ikakhulukazi kulabo abakhuluphele ngokweqile. Lapho zikhulu kakhulu kufanele zikhishwe ngokuhlinzwa.
Lapho ilunga liphuma ngaphandle kwesokhethi, libanga ukuhamba kanzima.
Isifo sezinso sePolycystic
Ithinta ngaphezu kwamathathu amakati asePheresiya. Iqukethe i- ukubonakala kwama-cysts amaningi ezinso, okubangela ukwanda kuzo.
Isikhumba sigoqa i-dermatitis (ebusweni)
Ngenxa yokuchichima komsele wezinyembezi, kujwayelekile ukuthi ube nesikhumba.
Ngezinwele ezinde, zidinga ukubhulashwa kaningi ukunciphisa ubungozi bezinkinga ze-hairball. Bangababangela ukungakhululeki okuningi, njengokuqunjelwa noma ukuhlanza kanye nesicanucanu. Ukuxubha ngendlela efanele kanye nokudla okuseqophelweni eliphezulu kuzovimba kakhulu ikati lakho lasePheresiya ukuthi lingagwinyi izinwele eziningi ngokweqile.
Izintshisekelo zekati lasePheresiya
Manje njengoba sesazi konke ngekati lasePheresiya, kusekhona okunye engifuna ukukutshela khona: izifiso zalo.
Isikhathi esidlule sobukhosi
Ukukhuluma ngekati lasePheresiya nakanjani ukukhuluma ngezicukuthwane. INdlovukazi uVictoria yaseNgilandi (1837-1901) wayengomunye wababemthanda kakhulu. Namuhla bahlala izikhundla zokuqala zozalo luka-feline kusukela emhlabeni jikelele.
Leli yikati elihlale lihlobene nobukhosi, futhi yilokho inengubo ende futhi ethambile kunezinye izinhlobo zekati. Uma uyithinta, ucabanga ngokushesha ukuthi uphethe ukotini ezandleni zakho, hhayi ikati. Kepha khumbula ukuyihlikihla nsuku zonke ukuyigcina iphilile futhi icwebezela.
Lamakati ahlala nxazonke iminyaka 20. Amashumi amabili eminyaka wokutotosa, ukuphulula nokudla okumnandi!
Kungaphakathi noma ngaphandle?
Angithandi ukuhlukanisa amakati ngaleyo ndlela, ngoba phela sikhuluma ngezilwane ezenzelwe imvelo ukuzingela. Manje, kusuka ePheresiya besingasho, futhi besingeke siphaphame, ukuthi yenziwe ngabantu, ngakho-ke noma isenomzimba wekati, ngenxa yobuso bayo obuyisicaba ungaba nenkinga enkulu yokuhlala phesheya. Futhi empeleni, angicabangi ukuthi kukhona umuntu ongacabanga ukushiya uboya babo aphume endlini futhi akwazi ukuba naye kusofa, akunjalo? 🙂
Impango ... ikati lasePheresiya
Abahloli bamazwe baseYurophu abalethwe ePersia (manje eyi-Iran) ukudla, izinongo, ubucwebe ... namakati asePheresiya njengempango okushushumbisiwe.
Kunosaziwayo abaningi abanePheresiya njengomngani onoboya. Phakathi kwabo, Kim Kardashian o Giorgio Armani.
Bathi bayazithanda izincomo
Kuze kube seqophelweni lokuthi bathandana ngokwengeziwe. Ingabe kuliqiniso?
Ikakhulukazi ngemuva kokuvala inzalo, kufanele ulawule kahle lokho okudlayo, ngoba ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi kakhulu kulamakati, futhi kungadala ngisho nokuqhekeka emilenzeni.
Ikati lasePheresiya »peke-face»
Ubuso bodwa bungukuhluka kwekati lasePheresiya, elivela kuhlobo lofuzo. Banomlomo ocijile impela, futhi amakhala abo asondele emehlweni, okuyi kungadala izinkinga zokuphefumula noma zokudwengula.
Ama-litter amancane kakhulu
Ngokungafani namanye amakati, angaba ne-10 encane, AmaPheresiya anenani eliphezulu elingu-3 kuphela.
Intengo / Intengo yekati lasePheresiya
Uma ucabanga ukuthenga ikati lasePheresiya asikwazanga ukuqedela lo mhlahlandlela ngaphandle kokukunikeza okuthile amathiphu ukuze ukuthenga kwakho kube yimpumelelo kakhulu.
Njengamanje ungathola izikhangiso zokuthengiswa kwamakati alolu hlobo kunoma yiliphi ikhasi: Izikhangiso Eziyizinkulungwane, iSecond Hand, amakhasi e-cattery kanye nasezinkundleni ezithile. Kepha, Ngingaqiniseka kanjani ukuthi angikhohliswa?
Uyaluqonda yini ulimi?
Yebo, into yokuqala ukubheka ukuthi bakhuluma luphi ulimi. Kungabonakala njengesilima, kepha kulula ukuhlangana nabantu abamane babhale umbhalo ngolimi lwabo lwebele, bahumushe nomhumushi, bese bebeka lowo mbhalo emakhasini ewebhu. Abahumushi beWebhu abaqondile, futhi benza amaphutha ambalwa. Uma lowo mbhalo ubonakala, ngokwesibonelo, ubhalwe ngeSpanishi, kodwa unamagama ongawuqondi futhi abhalwe ngendlela engafanele, sola.
A kitten purebred akakaze mahhala
Lokhu kubalulekile ukukhumbula. Lapho ufuna ikati elihlanzekile, noma ngabe yini, lokho kuncane kakhulu (phakathi kwezinyanga ezi-2 kuya kwezi-4 ubudala), bayohlala befuna ukuyithengisa.
Umuntu othengisa izilwane kumele afake imininingwane yakhe yokuxhumana (okungenani, inombolo yocingo ephathekayo). Uma kuyindlu yenja, ngokungeziwe, kufanele ukuthi icacise i- ikheli leposi, the i-zoo nucleus futhi i imeyili.
Izithombe, kulapho okuhlangana khona
Wena, njengomthengi ongaba khona, Unelungelo lokucela ukuthi zingaki izithombe namavidiyo owafunayo. Uma nganoma yisiphi isikhathi uthola ukungathembeki okuthile engxenyeni yomthengisi, thola enye.
Ingabe ujahe ngokweqile?
Lapho umthengisi ebonakala eshesha kakhulu, noma lapho befuna ukukuthengisela ikati elingaphansi kwezinyanga ezimbili ubudala, ukungathembi. Ikati akufanele lihlukaniswe nonina ngokushesha okungaka. Kungcono kakhulu ukulinda kuze kube okungenani unamasonto ayisishiyagalombili ubudala, ngoba ngale ndlela bobabili unina nezingane zakubo bazobe beyifundise izisekelo zokuba yikati.
Izitolo zezilwane ezifuywayo
Ezitolo zezilwane ezifuywayo, imvamisa zinamakati ezinhlobo ezahlukahlukene, futhi uma zingenayo leyo oyifunayo, zizoyi-oda. Kepha kuthiwani ngalezi zindawo? Ngokudabukisayo iningi lezilwane ezithengiswa lapha kukhona umphumela wokuzala okukhulu evela emazweni asempumalanga. Omama bahlala emakhejini impilo yabo yonke, futhi bazala kuphela kaninginingi. Amakati afika esitolo ephila athambekele ekubeni nezinkinga eziningi zempilo esikhathini esifushane naphakathi.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuthenga esitolo, buza umsuka wangempela wekati. Akufanele babe nokusaba ngokukubonisa amaphepha wesilwane.
Ikati lasePheresiya lingenye yezinhlobo ezindala kakhulu emhlabeni, ngakho-ke nakanjani uzothola indlu yenja eduze kwakho. Kodwa-ke, kufanelekile ukuvakashela abaningana ukuze uwaqhathanise.
Ikati elihle lizoba:
Izikhungo zisesimweni esihle
Abaphuzi ngamanzi amasha futhi ahlanzekile
Umkhombe ohlanzekile ngokudla
Amathileyi ahlanzekile anesihlabathi esihlanzekile, awekho amaphunga amabi
Amakati azilungise kahle, anamajazi acwebezelayo nesifiso sokudlala, aphilile
Abazali benzalo bazobe sebebhalise nenhlangano yozalo (CFA, TICA, WFC ...)
Futhi-ke, kuzoxazulula konke ukungabaza kwakho onayo ngenkathi ikuvumela ukuthi ube nemidlwane ukwenza kube lula kuwe ukuthi ukhethe eyodwa.
Uma umthengela ikati, uzokunikeza uzalo ngephepha lokudlulisa umnikazi lapho ekunikeza lona. Uma kwenzeka ungabhalisanga, ngeke bakwazi (kuphela abalimi abakwaziyo) ukubhalisa uboya bakho kunoma iyiphi inhlangano.
Akuvamisile ukwenzeka, kepha ngezikhathi ezithile kukhona umuntu ikati lakhe elikhulisile futhi lifune ukuthengisa inzalo. Yebo, indlela enhle njenganoma iyiphi yokuthola ikati lasePheresiya, inqobo nje uma ikuvumela ukuba uze endlini yakhe ukuzoyibona, futhi ungaziniki lapho zingaphansi kwezinyanga ezimbili ubudala.
Isimo sempilo yenzalo
Akunandaba ukuthi ulithenga kuphi ikati lakho lasePheresiya, leli kumele ikhombise umlingiswa ojwayelekile we-puppy, okungukuthi, kufanele:
Ufuna ukudlala nabafowabo nonina
Yiba nelukuluku ngabantu abavakashela wena
Yiba nempilo enhle (amazinyo amhlophe, akukho mkhondo wohudo noma ukunuka komlomo, amehlo avulekile, akukho ukukhubazeka)
Ijazi kufanele libhulashiwe, ngaphandle kwamafindo
Izintengo zamakati wasePheresiya
Izintengo zamakati wasePheresiya zingahluka kancane. Esitolo sezilwane zingabiza cishe ama-euro angama-200, kepha zikunikeza zona ngaphandle kozalo futhi ngaphandle kwanoma yisiphi isitifiketi esiqinisekisa ukuthi siyi-purebred. Abantu bavame ukuthengisa amakati ngalezo zintengo futhi, ngakho-ke kuwukuhlakanipha ukucabanga ngokucophelela ngokuthi ufuna ukuthola i-Persian yakho kusuka kuphi.
Kodwa-ke, kumfuyi onobungcweti, bazokubuza ama-euro angama-700 eyodwa oyifunayo "njengesilwane esifuywayo", abazokunika yona inzalo, noma i-900 uma ufuna ukuyikhiqiza kabusha. Kuyabiza kakhulu, kepha Ngale ndlela wenza isiqiniseko sokuthi ugoduka nekati eliphilile, namaphepha ohlu lozalo kanye nokuhlolwa uma ngabe kukhona abakwenzile, nokwazi abazali.
Hlakulela ikati lasePheresiya
Akuvamile ukuthi amakati alolu hlobo ashiywe, kepha ezindaweni zokukhosela nasezikhungweni zezilwane kwesinye isikhathi uzithola. Lawa makati manje asebekhulile, abathi ngasizathu simbe bagcina kulezi zindawo. Uma ufuna umngane unomphela futhi ungakhathali ukuthi akanalo uhlu lozalo, thatha uhambo lokukhosela noma abavikeli endaweni yangakini. Kungenzeka ukuthi ikati lasePheresiya likulindile.
Kuze kube manje lo mhlahlandlela we-mega kolunye lwezinhlobo zekati ezithandwa kakhulu: ikati lasePheresiya. Sithemba ukuthi kube wusizo kuwe futhi, uma unesibindi sokuhlala nomunye walaba bangane abanoboya, vele ngiyakuhalalisela ngesinqumo. Uzothatha ekhaya isilwane esihle 🙂.
Jabulela inkampani yakho!
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati eliqhubekayo
Ngithenge ikati lami kumuntu oyimfihlo futhi ngokwami ​​ukubona ngifuna ukwengeza ukuthi kufanele ubheke amazenze nezinsini ezibomvana, ngoba uma limhlophe kusho ukuthi line-anemia. Banginikeza isifo sokushoda kwegazi ngenxa yamazeze ngaphoqeleka ukuthi ngimyise kudokotela wezilwane egijima, ngenhlanhla manje usephilile kodwa ukube ngangazi, ngangizobona usuku lokuqala.
Ungayinakekela kanjani ikati laseBrithani